Vory lanina i Magro androany, 16 jona11 – MyDago.com aime Madagascar
Tamin’ny hetsika androany tetsy amin’ny Magro, dia nihaino ny tafa nataon’ny filoha Ravalomanana tamin’ireo mpanao gazety Malagasy tany Afrika Atsimo no nanombohana ny fotoana, avy evy eo nanao tsipaipaika hoan’i RAZOELIMANGA Aline Michèlle izay nody mandry noho ny hafaliana be loatra raha nahare fa hody i Dada, marihina fa 67 taona io raiamandreny io.
Nisesy taorian’izany ny kabary samihafa :
Guy Maxime Ralaiseheno dia nilaza fa hisy « boite à idées » hapetraka eo amin’ny kianja Behoririka mba hanatsarana ny tolona sy hazahona ny hetahetam-bahoaka.
Manoela : raha ireny no komandy ny tafika, tsy mendrika hanangan-tsaina ny Malagasy. Maninona eto Madagasikara i Voninahitsy mipetsapetsana nefa any Afrika hendry be ? Marina ny tenin’ilay jeneraly iray iny ary tadidio ry tafika fa iry be galona tsy hitan-basy fa ianareo mandinika. Mifampiresana hatrany dia ho tsara ny 26 jiona.
Jeanson : “tournant” vaovao nanaomboaka tany Sandton iny. Rehefa tonga ny fiafaranan’ny krizy, miova ireo miaramila ireo satria olombelona ihany koa. Ny mahampatahotra anefa dia manakaiky adim-poko ; kely sisa ihany koa dia fandresena. Tadidio fa i Andry ihany no efa nandaka ny Maputo sy Addis Abeba ary tady hamerina izany.
Edouard : tsy maintsy esorina aloha ny vato misakana namboly krizy dia I Andry Rajoelina izany.
Manoela : raha ireny no komandy ny tafika, tsy mendrika hanangan-tsaina. Maninona eto Madagasikara i Voninahitsy mipetsapetsana nefa any Afrika hendry be ? Marina ny tenin’ilay jeneraly iray iny ary tadidio ry tafika fa iry be galona tsy hitan-basy fa ianareo mandinika. Mifampiresana hatrany dia ho tsara ny 26 jiona.
TIM : Nampiseho ny tanjany indray androany !
Auteur Solo Razafy*Publié le 16 juin 2011 16 juin 2011 Catégories Politique
3 réflexions sur « Vory lanina i Magro androany, 16 jona11 »
17 juin 2011 à 3 h 53 min
Misaotra antsika rehetra izay tonga tany @ Magro e! Eny foana isika no mifankahita, ary tsy ho avenlantsika io FATn’alika io raha tsy mirodana!
17 juin 2011 à 5 h 24 min
Efa vita ny sori-dalana vaovao izay mifanaraka amin’ny fanampahan-kevitrin’ny Filoham-panjakana SADC tao Afrika Atsimo, ary efa nahafantatra an’io daholo ny rehetra vao tany Gaborone saingy nisy mbola nanantena fa mety ho voaovan’ny Frantsay ihany izy io. Toy izao no firafitr’izany fanitsiana izany, raha dinihina ny amendements tadiavin’ny ankolafy 3 sy ny FR Simao:
1- Amnistie generale ho an’ny olona rehetra voarohirohy ara-politika, ka ny ct+cst vaovao no hanatanteraka azy.
2-Mody tsy misy fepetra ary manana zo feno tahaka ny rehetra ny Filoha teo aloha Ravalomanana.
3- Havaozina tanteraka ny andrim-panjakana najoro (CT+CST)sy ny CENI izay hikarakara fifidianana malalaka sy tsy mitanila mba handraisan’ny ankolafy hafa andraikitra.
4- Ity FR amendée ity no solon’ny constitution mandritra ny transition.
5- Manao sonia sy mandray andraikitra ny ankolafy 3 amin’ny fitatana ny firenena araka ny FR amendée. Tsy misy tolo-kevitra azo raisina intsony ankoatran’ny tolo-kevitra efa voahangona sy nifampiresahana tamin’ny SADC tao Gaborone, afa-tsy ny momba ny fanatanterahana ao aorian’ny rangom-pohy ny ankolafy 3.
6- Ny fiaraha-midinika samy Malagasy no hamaritra ny fotoana sy ny fomba hanatanterahana ny FR amendée.
7- Izay tsy voakasik’izao fanovana izao ao amin’ny FR Simao dia mitoetra sy tsy maintsy tanterahina.
Izay no dikany tsotra eo amin’ny lafiny amendements ny FR Simao. Tsy io akory no izy fa fandikana ny hevi-baventy ny communiqué SADC tao sandton ihany io.
17 juin 2011 à 5 h 59 min
Ny tafika izany hoa indrindra ireo lehibeny @ izao ireo dia olona gaigy avy.
Ny tokony atao izao dia manao hetsika masiaka eto amin’ny tanana fa tsy izy intsony io anaty rindrina efatra io.Ny hetsika milamina dia mitaky dinika milamina koa kanefa io Rajoelina io sy ny forongony tsy azo hifampidinihana noho izy mivadibadika lava io.
Vimbino ny langilangy sy gamoda hanoherana lacrymogene.
Précédent Article précédent : La position de la France par rapport à la décision de la SADC
Suivant Article suivant : Les valeurs d’une Nation